Yimuphi Abathengisi Abangafunda KuDell's IT Transformation Research? | Martech Zone
ULwesine, April 27, 2017 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 28, i-2017 Douglas Karr
UDell uchaza i-Information Technology Uguquko njengenqubo yokuthuthukisa ubuchwepheshe bolwazi nezokuxhumana ukuze yenze izimpilo zabantu zisebenze kahle futhi zibe ngcono. Ukuguqulwa kwe-IT kubuye kugxile ekwenzeni ngcono ingqalasizinda ukuze kukhuthazwe ukusebenza kahle kohlelo ngenxa yokwehla kokumoshwa kwezinsizakusebenza.
Bengisebenza naye UMark Schaefer kanye neklayenti lakhe, iDell Technologies, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukushicilela ama-podcast anikeza ukuqonda kubantu abashayela i-IT Transformation kanye nocwaningo olumangalisayo oluzungeze lo mnyakazo. I-podcast ibizwa ngokuthi Izinkanyiso.
Izinguquko ze-IT zigxile ekubukeni ukuthi uhlanganise ubuchwepheshe obungakanani ezinhlelweni zakho zebhizinisi, okuqhamuke ekusebenziseni kwayo, ukuthi ibhizinisi lakho likwazi kanjani ukuzivumelanisa nezinguquko kubuchwepheshe, nokuthi ibhizinisi likwazi kanjani ukuguquka lisebenzisa i-informatics .
Ukuthatha ukhiye we-IT Transformation
Njengoba uDell ehlaziya ukuthi yini inguquko kwezobuchwepheshe bolwazi, babuza uchungechunge lwemibuzo, ngoba ibekwe kangcono ukusisiza siphendule imibuzo ethile ebalulekile. Eziningi zalezi zinkinga ziqondiswe ezinkampanini ezithembele ekuguqulweni yi-It futhi zenzelwe ukuhlola izinga lomthelela lo mqondo omkhulu onawo empumelelweni yezikhungo ezinjalo. Le mibuzo ifaka phakathi: -
Uhlobo lobuchwepheshe olusetshenziswa kakhulu enkampanini yakho
Uhlobo lohlelo olusetshenziswayo ukuqhuba ibhizinisi lakho
Uhlobo lwemininingwane olusetshenziselwe ukuthuthukisa lezi zinhlelo
Futhi lusetshenziswe kahle kanjani ubuchwepheshe bolwazi ebhizinisini lakho.
Futhi, uDell ubheke izinzuzo okungenzeka ukuthi uguquko lwe-IT zilethe ebhizinisini lakho selokhu waqala ukuyisebenzisa. Ngenkathi izinkampani eziningi ziphumelele ukusebenzisa le ndlela, ezinye azikwazanga ukuthola izinzuzo ezigcwele zokusebenzisa uguquko kubuchwepheshe bolwazi. Kusukela ocwaningweni olwenziwe, kusobala ukuthi iningi lamabhizinisi likwazile ukubona i-IT Transformaton futhi isendleleni yokuguqulwa.
I-Luminaries Isiqephu 01: Silungile, Setha, Guqula… IT Yakho
Izinga lenguquko ye-IT inkampani eliyizuzile linomthelela osheshayo futhi ophathekayo ekukhuleni kwebhizinisi, ukwahlukana kokuncintisana kanye nekhono lokusungula. Malini? Abahlaziyi bemboni abaphambili be-IT benze lolu cwaningo futhi banezimpendulo ezimangazayo. Isikhathi: 34:11
Amabhizinisi aphumelele kakhulu namuhla anezimfanelo ezintathu ezihlukile. Okokuqala nokuphambili, bakwazile ukukhuthaza ukusetshenziswa kobuchwepheshe kuyo yonke imisebenzi yabo. Okwesibili, baqhamuke nohlelo oluyingqayizivele olukwazi kakhulu ukusebenzisa ubuchwepheshe bolwazi ngokusebenza kahle kakhulu. Njengoba ukuguqulwa kwe-IT kuhloselwe ukukhulisa umkhiqizo webhizinisi, izinkampani ezisebenzisa lo mqondo zinazo
Njengoba ukuguqulwa kwe-IT kuhloselwe ukukhulisa umkhiqizo webhizinisi, izinkampani ezisebenzisa lo mqondo ziye zafunda ukuzivumelanisa namafu e-inthanethi ukuze kukhiqizwe umkhiqizo. Okokugcina, izinkampani eziphumelele zikwazile ukudala uhlelo lobuchwepheshe bolwazi olulula ukusebenza noluthola bonke abasebenzi abakuleso sikhungo. Amabhizinisi aguqulwe ngokuphelele akhuthaza ukuxhumana okuhle okunqamula phakathi kwamazinga ahlukene wokubusa kuleyo nkampani ethile.
Ngabe ijubane liyinto ebalulekile ekuguqulweni kwedijithali?
Yebo. Iningi lamabhizinisi namuhla lithatha uguquko kwezobuchwepheshe bolwazi ukuze lubekwe kangcono ekwenzeni imikhiqizo nezinsizakalo ezintsha ngaphambi kwabancintisana nabo. Izinkampani eziphumelele kakhulu namuhla zikwazile ukwakha izinhlelo zokusebenza ezinamandla ngezinsuku nje ezimbalwa, izinhlelo zokusebenza ezizinzile kangangokuthi azivami ukuhlangabezana nezinkinga zesondlo.
Ukuguqulwa kwe-IT kusizile ukukhulisa umkhiqizo wezikhungo eziningi. Kuze kube manje, amabhizinisi asebenzisa ubuchwepheshe ayakwazi ukwenza amaphrojekthi awo kahle kakhulu futhi ahambise imiphumela ngaphambi kwesikhathi. Ngakho-ke, ukuguqulwa kwe-IT kuyisibusiso esifihlwe ezinkampanini eziningi.
Kusukela ekuqaleni, kusobala ngokwanele ukuthi uguquko lwe-IT luyadingeka ukuze ibhizinisi lakho liphumelele. Kodwa-ke, ngaphambi kokukhetha ukusebenzisa le ndlela emisha, kufanele uqale ngokusesha ngomphefumulo ukuze uthole isizathu sokuqala sokuthi kungani ukholelwa ukuthi ukuguqulwa kobuchwepheshe bolwazi kuzoletha inzuzo enkulu kunhlangano yakho.
Tshala imali kakhulu emisha ukuze ukwazi ukwakha ibhizinisi eliqinile, elikwazi ukuncintisana namanye amabhizinisi ohlobo lwakho. Ungaqala ube mncane, kepha uma usendleleni efanele, uzogcina usuyinkampani okufanele ubalwe nayo.
Yini Abathengisi Abangayifunda ku-IT Transformation?
Abakhangisi kufanele batshale imali ngokushesha kubuchwepheshe bokumaketha obunciphisa isikhathi nemali, ngenkathi kukhulisa inani lomsebenzi owenziwe. Lokhu kuzohlinzeka ngokuzuza okuzokhulisa umthelela wokumaketha kwakho ngenkathi kunciphisa isikhathi osichitha ukwenza lokho. Lokho kokonga kungabe sekuyisisekelo sokutshalwa kwezimali okuzoguqula ibhizinisi lakho.
Bhalisela ku-Luminaries on iTunes, Spotify, noma nge Okuphakelayo kwePodcast.
Tags: Dellukwaziswa kwesimanjeitIngucukoyini inguquko